Bilaogera Asongadina: Oumar Dembélé · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2011 4:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Español, Aymara, English
Taorian'ny tafatafa tamin'i Yaya Coulibaly, Rising Voices dia te-hampahafantatra anao an'i Oumar Dembélé, mpampianatra any amin'ny sekoly fanabeazana fototra ao amin'ny sekolim-bahoaka fanabeazana fototr'i Zambougou ao amin'ny tanànan'i Cinzana-Gare, ao amin'ny Faritr'i Ségou any Mali. Oumar koa dia mpikambana amin'ny tetikasa Ségou Villages Connection Fifandraisan'ny Tananan'i Ségou, tohanan'ny RV, izay nanomboka ny taona 2011. Ny maha mpampianatra dia manome tombony ho an'i Oumar noho izy efa zatra mifandray amin'ny mpianany sy ny fianakavian'izy ireny. Ary hampiasainy izany talenta amin'ny serasera izany rehefa mifandray amin'ny hafa, ka amin'ity tranga ity, amin'ny mponina ao an-tanàna. Nangoniny ny tantaran'izy ireo ary nalefa tamin'ny SMS tany amin'ny mpiandraikitra ny tetikasa, Boukary Konaté, izay namoaka izany tao amin'ny bilaogin'ny Ségou Infos [fr]. Ankoatry ny asa sy ny fianarana ny teknolojia, tia manao fanatanjahan-tena sy mamaky boky koa izy. Tsy tia mipetrapetraka izy, ary mandritra ny fialantsasatry ny sekoly dia miasa any an-tanimboly izy.
Amin'ity tafatafa tanaty mailaka ity, Oumar izay mibitsika ao amin'ny @D1Oumar, mizara amintsika ny fialamboliny, ny tontolo androny miaraka amin'ilay tetikasa, ary ny fiantraika tsaran'izany ho valin'ny fiofanana.
Oumar Dembélé: Niditra tao amin'ny fikambanana aho noho Andriamatoa Boukary Konaté – @Fasokan nandritra ny fivahinianany tao amin'ny Cinzana-Gare. Nanolo-kevitra ahy izy fa ny fidirako amin'io tetikasa io dia mandefa vaovao amin'ny alalan'ny SMS, avy eo dia tsy maintsy manao fiofanana amin'ny aterineto ao amin'ny Dioro. aho. Nahasarika ahy ilay tetikasa satria voamariko fa tsy dia miresaka betsaka ny zava-miseho any amin'ny faritra ambanivohitra isika. Tsy dia fantatry ny haino aman-jery matetika ny zavatra tena misy any amin'ny tontolo ambanivohitra.
OD: Ségou dia tanàna manan-tantara miaraka amin'ny mahery fo toa an'i Binton Coulibali, N’Golo Diarra, Da Monzon Diarra, sns. Izy dia fifangaroan'ny foko Bambara, De Bozo, Sarakolé, Peulh ary foko hafa. Ny fambolena, fiompiana omby, fiompiana, fanjonoana, ary varotra no foto-pivelomana misy ao, ka ny fambolena no tena mibahan-toerana sy tena zava-dehibe.